MK-677 (Ibutamoren) na-arụ ọrụ nke ọma Maka Buildinglọ Arụ Ọrụ? Nyocha Sarm
/blog/gallery/MK-677 (Ibutamoren) na-arụ ọrụ nke ọma Maka Buildinglọ Arụ Ọrụ? Nyocha Sarm [2019 NEW]
Ihe na 09 / 29 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
1. Gini bu MK-677 (Ibutamoren)?
MK-677 (Ibutamoren) ntụ ntụ (159752-10-0) bụ ihe omumu hormone ọhụrụ (GHS). Ihe omumu homonu nke uto bu ihe eji eme ya dika ulo akwukwo iji nye aka na abawanye uto hormone. Achọrọ homonụ nke uto ka ahụ gị rụọ ọrụ nke ọma. Nke a na - enyere gị aka ịkwalite uto anụ ahụ.
Ntụ ntụ MK-677 (Ibutamoren) anaghị etinye aka na usoro ọmụmụ nke nje na ndu ndị ọzọ dịka mmepụta homonụ nke eke. Ihe nke a pụtara bụ na ị ga-enwe mmụba na ọkwa homonụ nke uto n’enweghi ihe nsonaazụ dịka nnabata testosterone. Mkpo ozu nke MK 677 dị ọtụtụ mana anyị ga-atụle ha niile ma emechaa na edemede a.
2. Kedu ihe kpatara MK-677 (Ibutamoren) nwere aha dị iche?
Ibutameron makwaara dị ka mk677 nutrobal, Ibutamoren Mesylate na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike izo ya dịka MK 677 (Ibutamoren) sarm ntụ. Aha ndị a nile na-ezo aka n'otu kọlụm. Nke a bụ n'ihi na ụfọdụ mmadụ na-ere ahịa ya dịka sarm mana ụfọdụ ndị ọkachamara na-ekwu na ọ bụghị nke ezinụlọ ịkpa ọchị.
A na-ahụkwa Ibutamoren dị ka ọgwụ pụrụ iche n'ihi na ọ dị ụkọ ịchọta ọgwụ nke nwere ike ịkwalite ọkwa nke homonụ na-abawanye na IGF-1 (Insulin-like development factor).
3. Kedu ka MK-677 (Ibutamoren) si arụ ọrụ?
MK-677 (Ibutamoren) ntụ ntụ (159752-10-0) nutrobal na-arụ ọrụ site na ịba ụba nzuzo nke homonụ na-eto (GH) na ihe uto-1 (IGF-1) .A na-enweta nke a site na iitatingomi etu hormone hormone si arụ ọrụ. Ghrelin bụ homonụ na-ahụ maka onwe ya ma ọ bụrụ na ị hụbeghị ya mbụ.
Nke a na - enyere ya aka ijikọ ya n'ụzọ dị mfe na otu n'ime ndị raara onwe ya nye GHSR (ghrelin receptors) nke ụbụrụ. Ozugbo ndị kpaliri, ghrelin na - anabata ya na - eme ka mmepụta hormone na - eto uto n'ime ụbụrụ. Ọ na-arụ ọrụ dị ka neuropeptide na CNS (sistemụ akwara Central). Igwe homonụ a bụ ihe ama ama maka ịdị na-akpa ya iji kpalie agụụ.
Ọ na - achịkwa nkesa ike anyị n’ahụ, ọ na - agbanwekwa ụzọ anụ ahụ si agbari abụba. Ọ nwekwara ike imetụta ike anụ ahụ iji gbakee n'ọnọdụ dịka oke ibu na ọrịa shuga Xdị 2.
Mgbe ejiri ya onwe ya, mk 677 nwere ikike ịbawanye mmepụta HGH na-enweghị inye ọgba aghara ọ bụla ọzọ. Ọtụtụ n'ime ndị na-ewere ya na-eto mkpokọ mk 677 n'ihi na ọ naghị ebelata ọkwa testosterone dị na homonụ na-eto, nke bụ nnukwu ego ma ọ bụrụ na ị na-atụle uru.
4. MK-677 (Ibutamoren) Uru
Uto olu na iweghachi
Otu uru kasịnụ mkpokọ X XXXX na-eme ka akwara too uto na mgbake. Ebe ntinye mk 677 na-abawanye ọkwa IGF-677 na GH onye ọrụ nwere ike itinye nha dị mfe. Ihe nyocha na sayensi kwadoro nke a. Mmụta emere gosipụtara mmụba dị ukwuu na mussle karịsịa na ndị mmadụ nwere oke homonụ na-eto eto na ndị okenye karia afọ 1 na karịa. Ọtụtụ nyocha mk 60 sitere n'aka ndị ọrụ na-atụkwa aro na ọgwụ a nwere ezigbo nsonaazụ dị mma na ụlọ anụ ahụ.
Ịba ụba ọkpụkpụ
Ka ụkwara dị n'afọ, ịdị nbipu nke ọkpụkpụ na-ebelata. Ọtụtụ ndị agadi na-enwe nkwarụ ọkpụkpụ na osteoporosis na-akpata enweghị ngagharị na mgbu. Ufodu umuaka na ndi okenye kari ha gabu nke a ma o nwere ike buru na ogweghi nke ọkpụkpụ. Ihe mgbakwunye ntụ ntụ MK-677 na-akpali homonụ nke itolite ma na-emekwa ka ntụgharị ọkpụkpụ na-arụ ọrụ. Nke ahụ bụ ọgwụ ahụ nwere ike inye aka na ike ọkpụkpụ.
Na-egbochi Esemokwu Akwara
N'ime nyocha sayensị nke emere na mmadụ asatọ na-ebu ọnụ, Ibutamoren mk 677 nwere ike ịgbanwe mmebi anụ ahụ na mfu protein. Ọmụmụ ihe ọzọ gosipụtara na ọgwụ ahụ nyekwaara ndị ọrịa mere agadi nwere nkwarụ aka aka inwe ike ọkpụkpụ aka na uru ha bara uru.
Uto Tendon na Mgbochi Mbibi
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-ewu ụlọ na-ekwupụta otú otu mmerụ ahụ si gbuo oge na-aga n'ihu na-eme ya site na imechi ha na mgbatị ahụ ụbọchị, ma ọ bụ izu. Ọ bụrụ na ị na-etinye oge gị niile na mgbatị ahụ, mmerụ ahụ enweghị ike ịpụ. Ọzọkwa, mmụba ngwa ngwa nke akwara nke na - esite na ọzụzụ ọzụzụ gị siri ike, nwere ike itinye ọtụtụ nrụgide na akwara gị gụnyere ọkpụkpụ na - eduga na mmerụ ahụ.
A bịa n’ihe banyere imezi akwara, akwara, na ọkpụkpụ, homonụ na-eto eto dị mkpa. Site na iwelie ọkwa hormone na-eto eto, mkpokọ X XXX na-ekwe nkwa na anụ ahụ na-emezi ma na-adịkwa mma. A na-eme ka ọkpụkpụ gị dịkwuo oke ma otu a ka ọkpụkpụ gị ga-esi bulie ike na-enyere gị aka ijigide ọtụtụ uru ahụ. N’ihi ya, ị gaghịzi na-enwekarị mmerụ ahụ mbụ.
Imirikiti ndị ọrụ na-ekwupụta na mk677 nyeere ha aka jidesie abụba ike. A kọrọ na Mk 677 na -efu nsonaazụ dị ịtụnanya ma eleghị anya n'ihi na GH bụ naanị homonụ nke nwere ike inyere gị aka ịsacha ma abụba na visceral mgbe ị na-enyere gị aka ịmalite ịmịkọta akwara. N'ihi ya, Ibutamoren na-agbakwunye ya mgbe niile na mmegharị ahụ.
Akpụ ahụ ka mma, mbọ na ntutu
Achọpụtala homonụ na-eto eto iji mee ka akwara ndị dị n’ahụ na-abawanye. Ebe ọ bụ na MK-677 na-arụ ọrụ GH, ọ bụ ya mere ọgwụ ahụ ji enwe ike ịtụgharị ma nwetaghachi ọdịdị nke ntutu, mbọ, na anụ ahụ.
Uru mk 677 ọzọ bụ na ọ na-akpali nnabata ghrelin na enwere ike ibute ya nootropic mmetụta. Dika ihe omumu nyocha nke NCBI biputere nwere ike inye aka mee ka ụbụrụ rụọ ọrụ nke ọma site na ịmetụta ụzọ abụọ na-abụghị. Usoro ndị a gụnyere ịkwalite IGF-1 na-enyere aka ịkwalite njigide ebe nchekwa na ikike mmụta. Ma, site n'ịbawanye mma na ogo nke ụra ụra REM. Leepra dị oke mkpa n'ihi na ọ na-ahụ maka ịrụzu oke ọrụ.
Na-egbochi ụkọ homonụ nke uto
Mk 677 na-abawanye IGF-1, IGFBP-3, na ọkwa hormone na-eto eto na ụmụaka nwere ụkọ homonụ na-eto eto na-agbanweghi nchịkọta cortisol, insulin prolactin, glucose, thyroxine (T4), thyrotropin ma ọ bụ triiodothyronine (T3).
Ibutamoren gosipụtara mmetụta yiri nke ahụ na ụmụ nwoke nwere GH, mana glucose na insulin mụbara.
Homonụ na-eto uto na-eme ka ọnya na-adị mma ma na-eme ka anụ ahụ dịkwuo elu, yabụ Mk 677 na-enyere ndị a aka site na ịba ụba na ọkwa hormone na-eto. A na-akwado nke a site na akụkọ nke ndị ahụ na-ahụ maka ozu bụ ndị ji ibutamoren tupu.
Ndị mmadụ ejirila MK-677 mee mkpesa obi iru ala site na hangovers.
Bụ onye Ghrelin Mimetic ị kwesịrị ịtụ anya iri nnukwu nri mgbe ị nọ n'okpuru Ibutamoren. Ma nke a bara uru ma ọ bụ ọghọm dị ka ebumnuche gị, ịkwesịrị ịghọta na ọ bụ otu n'ime nsonaazụ mkpokọ mkwekọ X-XXX.
Gbasara nke oma
Ibutamoren na-arụ ọrụ dị ukwuu na iwusi ọgụ na ọdịmma anyị ike. Ike nke ahụ gị nwere ịlụ ọgụ wee zere nsogbu oge na nfụkasị ọ bụla. Ga-ebido bi ezigbo ndụ nke udo nke obi.
5. MK-677 (Ibutamoren) okirikiri
Cycle 1: Iji nweta oke ntụpọ MK 677 (Ibutamoren) ntụ ntụ, ịkwesịrị ịmalite site na 10mg kwa 24 maka izu mbụ nke 11 nke iji tupu agbakwunye na 20-25mg kwa 24 awa mgbe e mesịrị gburugburu 12th izu. Enwere ike iwere nke a dị ka mmiri mmiri, nke ọnụ ma ọ bụ nke Capsule.
Cycle 2: I nwekwara ike ịmalite site na 15mg kwa elekere 24 ma gbatịkwuo ogologo oge X XX nke 90 gafere izu 677. Site n'ime nke a, ịgaghị enwe nsogbu gbasara nsogbu gia ọria ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ọ na-akpata.
Cycle 3: Otutu ndi na aru aru na-abiazi na okirikiri na-acho igbasa usoro ogwu ha nke X XXX na 677mg kwa ubochi ma dobe ogologo ngbako nke MK 50 nke izu asatọ.
Cycle 4: Ọ bụrụ na ịchọrọ iru akwara, ndị ọrụ na-atụ aro iwe ọgwụ Ibutamoren nke 30mg kwa elekere 24.
Cycle 5: Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ iwepu abụba, mgbe ahụ, ọtụtụ ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-atụ aro iwere 20mg kwa elekere 24.
Cycle 6: Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ isi iji gwọọ mmerụ ahụ, a na-atụ aro ntụpọ MK 677 nke 10-20mg kwa ụbọchị.
Ozi ọma ahụ bụ na ị gaghị achọ PCT (Post Cycle Therapy) maka mk 677 n'ihi na ọ naghị egbochi hormone ọ bụla.
6. Kedu ihe kacha mma MK-677 (Ibutamoren)?
Nchọpụta anyị na akụkọ sitere n'aka ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-egosi na 20mg ruo 30mg bụ usoro kachasị atụ nke MK 677. Usersfọdụ ndị ọrụ akọpụtala ihe karịrị 30mg nke ibutamoren kwa ụbọchị, mana nke a enyeghị nsonaazụ ka mma. Ogologo oge MK 677 egosiwo na ọ dị mkpa karịa usoro ibutamoren.
Ọ dị mkpa ka ị were ibutamoren ruo ogologo oge. Ahụ dị ogo hormone na-eto eto kwesịrị iwulite nwayọ n'ahụ gị. Mgbidi holoji nke nwayọ nwayọ nwere ike iwere izu ole na ole tupu ịmalite ịmalite inwe mmetụta ahụ.
Ebumnuche gị na-ekpebi ego mk 677 ịkwesịrị iji. Nke a bụ aro ịsụ aro maka ebumnuche dị iche.
Buildinglọ akwara: 30mg kwa ụbọchị
Ọnwụ nke abụba: 20mg kwa ụbọchị
Ọgwụ ọgbụgba: 10-20mg kwa ụbọchị
Ọ bụrụ na i jiribeghị Ibutamoren ntụ ntụ (159752-10-0) tupu mgbe ahụ, a na-atụ aro ka ịmalite na 10mg ka ị hụ etu ahụ si anabata ya.
7. MK-677 (Ibutamoren) Nwere Mmetụta Akụkụ?
Mk-677 nwere obere mmetụta na-adịghị obere ma ọ bụrụ na ọ dị, ọ bụrụ na ha mee, a na-achịkwa ya ngwa ngwa. Nke a bụ ụfọdụ n'ime mmetụta ndị a na-enwe:
Ihi ụra ogologo
Usersfọdụ ndị ọrụ nwere ike ihi ụra n’akwụsịghị akwụsị ruo ihe ruru elekere 12 mgbe ha nwusịrị ibutamoren nke kpatara mmetụta nke ike izugbe n’echi. Ọ bụrụ n ’ị ga - enweta nke a, ị kwesịrị iweda belata ahụ ma ọ bụ kewaa ya ugboro abụọ kwa ụbọchị yana mmetụta nke a X XXXX ga-apụ naanị ya.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọgaghị adaba na ndị ọrụ niile, ụfọdụ ndị ọrụ na-enweta nro nro mgbe ha na-a ibụ ibutamoren. Ọkpụkpụ a MK 677 ga-agwụkwa ozugbo ị kwụsịrị ibutamoren.
May nwekwara ike ịnweta njigide mmiri na agụụ iri nri mana nke a na-ebilite mgbe ị na-a ibụ ọgwụ oke ibutamoren. Oge ụfọdụ, mmetụta ndị a niile na-apụ apụ ga-apụ n'onwe ha mgbe ị kwụsịrị iwe mk 677.
8. Kedu ihe ọkara ndụ nke MK-677 (Ibutamoren)?
Ọkara ndụ Mk 677 dị ihe dị ka awa 24. Ihe nke a putara na tiori bu na mmadu puru iri nri nke ya kwa ubochi. Mana achọpụtala na ọ bụrụ n’ide otu ọgwụ kwa ụbọchị, ọ̀kwa homonụ nke uto gị nwere ike ịmị n’otu oge.
Nke a nwere ike iso mmụọ ịda mba ma ọ bụ ike ọgwụgwụ. Enwere ike izere nke a site na kewaa ọgwụ gị abụọ n'ime otu ụbọchị ọ bụla ma ọ bụ rie ya tupu obere ịrahụ ụra. Site n'ime nke a, ị ga-arahụ ụra dị ka eze, ọ gaghịkwa emetụta nrụpụta gị na ụbọchị niile.
9. Nsonaazụ MK-677 (Ibutamoren)
O ziri ezi ịsị na nsonaazụ Mk 677 na-ewuli elu na ojiji ndị ọzọ e kwuru na mbụ dị ukwuu. Ibutamoren bụ ogige dị mma ebe ọ bụ na ọ na - eme ka akwara ike dịkwuo mma, ma na - enyere aka na akpụkpọ, ntutu na abụba ọkụ.
Ndị ọrụ nke kerịta Mk 677 tupu foto na mgbe ọ gachara foto na nsonaazụ gosiri na ibutamoren nwere ike ịgbanwe ihe ha nwere nke ukwuu. Ha nwere ike tinye oke olu ma ha na-efufu ya.
Mgbe eji ibutamoren ya na ndi ozo aru SARM dika MK-2866 na LGD-4033, ọ nwere ike ịgbanwe ahụ gị kpamkpam, na-enye nsonaazụ na-emetụta uche. Ikwesiri iburu n’obi na ikwesiri igba mbọ ma dozie ezigbo nri ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta nsonaazụ Ibutamoren kacha mma (159752-10-0).
10. Ekwadobere MK-677 (Ibutamoren) FDA?
Ebe ibutamoren ka bu Nchọta Ọgwụ Ọhụrụ, FDA akwadobeghị ya. Agbanyeghị, mkpokọta X XXX nke ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na mpaghara ahụ na-ewulite na ọgwụ ahụ adịghị mma. Emeela ka omumu ihe omuma nke ndi sayensi kwenyere na ogwu ahu adighi nma.
11. MK-677 (Ibutamoren) adịghị nchekwa?
Ibutamoren nwere nchekwa ma ọ bụrụ na ewere ya na usoro onyonyo ndị a tụrụ aro ha. Ọ dị mma nke ukwuu na ndị ahụ gbasiri ike. Agbanyeghị, ọ bụrụ na a theụrụ ọgwụ ahụ n'ọtụtụ ọnụọgụ dị elu karịa ka a tụrụ aro ya, ndị ọrụ nwere ike ịnwe edema na olu mgbu. Mana gịnị kpatara ị ga - eji chọọ ị higherụ ọgwụ dị elu karịa ọgwụ a tụrụ aro gị?
Ọzọkwa, mmetụta ole na ole na-adịghị mma nke ị nwere ike ịbelata na aka ha ozugbo ị kwụsịrị iji Ibutamoren. Na mgbakwunye, enwere ike ijikwa ha ọbụlagodi mgbe ị na-eji ọgwụ ahụ.
12. MK-677 (Ibutamoren) iwu kwadoro ịzụta?
Ọtụtụ ndị na-ajụ, ọ bụ MK 677 maka ọrịre? Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ha, echegbula, anyị ga-aza ajụjụ a ebe a.
Ugbu a, MK-677 ntụ ntụ (159752-10-0) dị naanị maka ire ere dị ka ọgwụ nyocha, yabụ na usoro iwu, ọ siri ike inweta ọgwụ ahụ ma ọ bụrụ na ị kwuo na ịchọrọ ya maka ahụ. Ka o sina dị, imirikiti ndị na-ahụ maka arụ na-ekwu na ha na-azụta ya maka iji nyocha eme ihe iji gosi na azụtara ha. Tupu ịpị bọtịnụ 'MK 677 ahụ n'ịntanetị', jide n'aka na onye na-ebubata ihe ị zụtara bụ nke iwu na nke iwu kwadoro. Shouldkwesiri ijide n'aka na ị na-azụta ụdị ọgwụ ahụ kachasị dị ọcha n'ihi na ụdị ụdị oriri na-adịghị mma nwere ike ibute nsonaazụ dị egwu.
13. MK-677 (Ibutamoren) Maka Nrụpụta Ahụ
Ibutamoren aburula onye a ma ama na obodo ndi a na-ewu aru nke ukwuu. Isi ihe mere eji etinye mkpobido mk677 n'ime ụlọ akwara bụ maka ebumnuche ịkwalite ọkwa GH. Onye obula nke na ewukwuru aru mgbe nile na-ele anya ibu onye lekwasara anya na onye kasi.
Ebe ọ bụ na homonụ na-eto eto na-arụ ọrụ dị mkpa na arụ nke anụ ahụ, ha chọrọ ka ọ nọrọ n'ọkwa dị oke elu ka o kwere mee mgbe ị na-adị nchebe. Di elu nke homonụ nke uto, ka ngwa ngwa odiba ngwa ngwa na - enwe ike itinye uzu ozo.
Ebe uto Hormones di oke onu ahia, onweghi uzo ozo eji eme enyi iji kwado uto homonụ, ewezuga Nutrabol. Mk 677 bụ ụzọ dị ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere HGH (Hormones Hormones) ma nwee ike ịkwalite ọkwa nke hormone nke uto nke mmadụ nke ọma.
You nwere ike ịme ntinye aka nke MK-677 n'ịntanetị. MK 677 maka ire ere dị ka kemịkal maka nyocha. You ga-ahụkwa ọtụtụ bodybuilders zụrụ ibutamoren ma kwuo na ọ bụ naanị maka nyocha.
Ọ dịkwa mkpa na ịmara na Nutrobal na-anọkarị SARM. Ihe atụ zuru oke bụ nchikota nke S23, MK-677, na RAD140 (Testolone) ntụ ntụ.
US National Library of Medicine, Ulo akwukwo nke Health, Ralf Nass, Suzan S. Pezzoli, Mary Clancy Oliveri, James T. Patrie, Frank E. Harrell, Jr., Jody L. Clasey, Steven B. HeymsfieldMark A. Bach, Mary Lee Vance, na Michael O. Thorner, MB, BS, D.Sc, Ntinye nke Oral Ghrelin Mimetic na Nchịkọta Ahụ na Nsonaazụ Ntinye Ahụike na Ahụ Ike Ndị Agadi
Janssen I, Heymsfield SB, Wang Z, Ross R. Skeletal muscle mass na nkesa na 468 ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị 18-88 yr. J Appl Physiol. 2000; 89: 81 – 88
Adunsky A., Chandler J., Heyden N., Lutkiewicz J., Scott BB, Berd Y.,. . . Papanicolaou DA (2011). MK-0677 (ibutamoren mesylate) maka ọgwụgwọ nke ndị ọrịa na-agbake site na nkwonkwo ụkwụ: ọmụmụ ihe dị iche iche, usoro ọmụmụ nke IIb na-achịkwa. Ebe a na-edebe ihe ochie nke Gerontology na Geriatrics, 53 (2), 183 – 189.
Onye na-ahụkarị steroid Mibolerone (Nyochaa tụlee) online
Ihe 10 kachasị mma Anabolic Steroids Material Raws	Echiche ndị a na-ahụkarị na steeti anabolic steroid
Entecavir hydrate ntụ ntụ